निकोडेमस को हो? , विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
पृथ्वीमा आफ्नो जीवनको दौडान येशूले थुप्रै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको ध्यान खिच्नुभयो। सबैभन्दा धेरै याद गरिएकाहरू मध्ये निकोदेमस थिए। उनी उच्च परिषद्का सदस्य थिए जुन अग्रणी विद्वानहरूको एउटा समूह थियो जसले रोमीहरूको सहभागितामा येशूलाई क्रूसमा टाँगे। निकोदेमसको हाम्रो उद्धारकर्तासँग एकदम भिन्न भिन्न सम्बन्ध थियो - यस्तो सम्बन्ध जसले उहाँलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्‍यो। जब उनले पहिलो मलाकीलाई येशूसँग भेट गरे, उनले रातमा यो कुरा जोड दिए। किन? किनकि यदि उसले कुनै त्यस्तो व्यक्तिसँग देखेको भए उसले पढ्नुपर्थ्यो भने जसको शिक्षा उसको काउन्सिलहरूको बिरुद्दको प्रतिकूल रूपमा प्रतिकूल थियो। उहाँ आफैंमा देखा पर्दा लाज लाग्यो।
केही समय पछि हामी निकोदेमस देख्छौं जुन रातको आगन्तुक भन्दा धेरै फरक थियो। बाइबलले बताउँछ कि उसले केवल येशूका सल्लाहकारहरूको विरूद्धमा प्रतिवाद गर्नुभएन, तर पिलातसलाई येशूको मृत्यु पछि शरीर हस्तान्तरण गर्न व्यक्तिगत रूपमा अनुरोध गर्ने दुई व्यक्तिहरूमध्ये उनी पनि एक थिए। निकोदेमस भन्दा पहिले र निकोदेमसले ख्रीष्टलाई भेट गरे पछि दिन र रातको भिन्नता हो। के परिवर्तन भएको थियो? खैर, यो उही रूपान्तरण हो जुन हामी सबैलाई हुन्छ जब हामी येशूलाई भेट्यौं र उहाँसँग सम्बन्ध राख्दछौं
निकोडेमसजस्तै हामीमध्ये धेरैले आध्यात्मिक तवरमा मात्र भरोसा राख्यौं। दुर्भाग्यवश, निकोडेमसलाई मान्यता दिएझैं हामी यससँग सफल छैनौं। पतित व्यक्तिको रूपमा, हामी आफैंलाई बचाउने क्षमता छैन। तर त्यहाँ आशा छ। येशूले उसलाई बुझाउनुभयो - «परमेश्वरले आफ्नो छोरालाई संसारको न्याय गर्न पठाउनुभएन, तर संसार उहाँद्वारा बचाइनेछ। प्रत्येक मानिस जसले उसलाई विश्वास गर्छ उसको न्याय गरिनेछैन। (यूहन्ना .3,17..18-)
निकोदेमसले परमेश्वरको पुत्रलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटे र उनलाई अनन्त जीवन प्राप्त गर्ने कुरामा विश्वास गरेपछि, उनी यो पनि जान्दथे कि येशूसँगै उनी अब निष्कलंक र परमेश्वरसामु शुद्ध छन्। त्यहाँ लज्जित हुनुपर्ने कुनै कुरा थिएन। उसले येशूलाई के भनेको थियो भनी उसले सिकेका थिए - "तर जसले सत्य गर्दछ उसले ज्योतिमा आउँदछ ताकि यो देखियो कि उसको कामहरू परमेश्वरमा गरिसकिएको छ"। (यूहन्ना १:3,21:१)
येशूसँग सम्बन्ध गाँसेपछि हामी आफैंमा येशूमाथिको विश्वासको लागि आदान प्रदान गर्छौं जसले अनुग्रहको जीवन बिताउन हामीलाई स्वतन्त्र गर्दछ। निकोडेमससँग जस्तै, भिन्नता दिन र रातको बीचमा ठूलो हुन सक्छ।